Fisolokiana menaka CBD tokony ho fantatrao - Victor Mochere
Taona vitsivitsy lasa izay, ny vokatra marijuana sy CBD dia tsy ara-dalàna. Noho izany, tsy dia nisy safidy firy momba ny vokatra azo ho an'ny besinimaro. Saingy avy eo dia tonga ny onjam-panafahana ara-dalàna sy fikarohana momba ny tombontsoa omen'izy ireo ny olona. Amin'izao fotoana izao, sary hafa mihitsy izany satria vokatra tsara an'arivony no azo ary efa tapitra ny fivarotam-panafody. Na izany aza, tsy ny vokatra rehetra hitanao dia mendrika ny fotoananao sy ny volanao. Nitombo be ny vokatra mivarotra menaka CBD izay tsy misy tombony. Noho izany, alohan'ny hanombohanao maka vokatra, dia misy fisolokiana menaka CBD mahazatra tokony ho fantatrao. Ny fananana izany fahalalana izany dia hamonjy anao amin'ny fomba maro.
Fisolokiana menaka CBD ambony indrindra sy ny fomba fiasan'izy ireo
Nahoana no olana lehibe ny fisolokiana menaka CBD?
Ahoana ny fahitana ny menaka CBD avo lenta
Hatramin'ny nahatongavan'ny CBD ho ara-dalàna tany amin'ny toerana maro dia nitombo ny fitaka. Ny sasany amin'ireo fisolokiana ambony indrindra tokony hojerena dia ahitana:
1. menaka voanio hemp na menaka hemp
Ny fisolokiana iray izay malaza amin'ny tsenan'ny CBD dia ny fivarotana menaka voanio hemp ho menaka hemp. Ny mpanamboatra dia mahazo menaka voan'ny hemp aorian'ny voan'ny hemp manindry mangatsiaka. Ny vokatr'izany dia menaka manara-penitra misy tombontsoa ara-pahasalamana maro ho an'ny vatan'olombelona. Na izany aza, ny menaka voan'ny hemp dia tsy vokatra CBD. Izany dia noho ny zava-misy tsotra fa tsy misy soritra cannabidiol. Dingan-dava mora ny menaka voan-javamaniry fanosihosena mangatsiaka, noho izany dia misoloky ny olona ny mpanamboatra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny menaka ho menaka hemp. Ho hitanao fa ity menaka ity dia mora lavitra noho ny tena menaka hemp izay misy kanabidiol.
Tsy mora ny mahita ny fahasamihafana misy eo amin'ireo menaka roa ireo noho ny mpanamboatra scam. Mampiasa marika izy ireo izay mamitaka ny mpanjifa hino fa ny menaka voan'ny hemp dia vokatra CBD. Saingy ny ravina hemp ihany no misy cannabinoids 100 mahery. Tsara ny manamarika fa ny menaka hemp dia tena mahery satria vokatra CBD feno spectrum ity. Ny vokatra CBD feno spectrum dia misy THC ankoatry ny cannabinoids hafa. Noho izany, tsy vitan'ny hoe lafo kokoa fa mety hahatonga anao ho avo. Ny menaka voanio hemp dia mora ary tsy hisy vokany mitovy.
2. Tolotra CBD maimaim-poana
Rehefa mihamaro ny olona mahita ny vokatra CBD dia mitombo ny fangatahana. Ity fitomboana ity dia nahatonga ny mpanamboatra nanararaotra sy nampiakatra ny vidin'ny entana isan-karazany toa ny menaka CBD. Misy fahatsapana famoizam-po eo amin'ny mpanjifa, mitarika amin'ny fiakaran'ny tolotra andrana maimaim-poana. Na dia milaza aza ny tolotra fa manome fanamaivanana ho anao ianao, dia mety handany dolara an-jatony mihoatra noho izay nokasainao holaniana ianao. Ny marina mibaribary dia ny tavoahangy menaka CBD dia tsy maimaim-poana mihitsy. Fisolokiana CBD daholo ireo, ary miparitaka haingana manerana ny firenena.
Ny mpivarotra dia manao dokambarotra fa maimaim-poana ny vokatra CBD ary mampiasa olo-malaza mihitsy aza mba hanohana azy. Na izany aza, mba hidirana amin'ny vokatra dia tsy maintsy manome azy ireo ny laharan'ny carte de crédit ianao. Ny carte de crédit dia handrakotra ny saran'ny fandefasana ny vokatra ho an'ny mpanjifa. Ity dia saina mena mibaribary mba hisoroka anao amin'ny mpivarotra toy izany. Na dia tsy olana lehibe aza ny fandoavam-bola, dia tonga ny olana rehefa misoratra anarana ho mpikambana amin'ny fitsarana ianao. Tamin'ny fanomezanao ny antsipirian'ny carte de crédit dia nanome alalana tsy nahy momba ity maha-mpikambana ity ianao.
Na dia azonao atao aza ny manafoana izany ao anatin'ny 14 andro, dia tsapanao fa ny sara amin'ny carte de crédit dia tsy vitan'ny hoe ny saran'ny fitaterana. Fisolokiana feno fahasahiana izay ampiasain'ny mpanamboatra sy mpivarotra maro satria mety tsy ho fantatrao akory fa nanao sonia ny famandrihana ianao. Raha tsy liana amin'ny fitantanam-bola ianao dia mety hampiasa ny antsipirihan'ny mpisoloky mba hampitomboana ny maha-mpikambana anao hatramin'ny tsy nahitanao ny daty fanafoanana.
3. Copycat CBD marika sy orinasa maromaro
Eto no ilaina ny fitandremana rehetra. Ny scam copycat no sahy indrindra amin'izy rehetra ary miely patrana amin'ny indostrian'ny CBD miroborobo. Ny Copycats dia manana paikady fantatra izay itondrany ny marika sy ny anaran'ny orinasa CBD ambony sy ny marika ny vokatra. Hividy azy ireo ny mpividy amin'ny fiheverana fa mahazo vokatra avo lenta avy amin'ny mpanamboatra azo itokisana izy ireo. Tsy fantatrao fa ny tranonkala idiranao dia tsy ny tany am-boalohany. Miankina amin'ny olona mampiasa teny am-bava hiresahana momba ny vokatra ny kopia.
Satria maro no diso tsipelina, dia nividy maka tahaka avy amin'ireo tranonkala ireo izy ireo. Ireo mpivarotra ireo ihany koa dia mandray anjara amin'ny fisolokiana momba ny carte de crédit izay misoratra anarana tsy fantatrao amin'ny famandrihana fitsarana. Mivarotra vokatra sandoka ho anao izy ireo ary tsy mitsahatra mampandoa ny karatrao mandra-pahazoanao sy hanafoananao. Tamin’izay fotoana izay dia efa nanao vono olona izy ireo ary niroso tamin’ny fikarohana ilay niharam-boina manaraka. Ataovy azo antoka fa fantatrao ny anaran'ny mpanamboatra alohan'ny hividianana raha te hiala amin'ity fisolokiana ity ianao.
Na ny ankamaroan'ny vokatra multilevel aza dia tsy ara-dalàna, ary tsy mivarotra anao ny vokatra CBD ilainao. Mandehana ao amin'ny pejin'izy ireo ianao, ampio ny vokatra sasany amin'ny sarety ary mametraha baiko. Tsy maintsy miandry andro na herinandro vitsivitsy vao mandefa. Na izany aza, tsy tonga ny vokatra rehefa tonga ny zava-misy fa voafitaka ianao. Tsy misy vokany ny ezaka rehetra ataonao mba hanatonana ny orinasa resahina.
4. Filazana tena tsara loatra
Ny iray amin'ireo fomba manan-danja indrindra amin'ny mpanamboatra sy mpivarotra CBD misarika ny sain'ny mpanjifa dia amin'ny alàlan'ny fitakiana ara-barotra. Maro no milaza fa ny menaka CBD sy ny vokatra hafa no valiny ho an'ny olona voan'ny aretina. Raha ny marina, na dia manome fanamaivanana kely aza ny CBD, dia tsy misy porofo ara-tsiansa fa manana fahaizana manasitrana ny marijuana na cannabis. Noho izany, mitandrema ary mialà amin'ny olona rehetra mitaky tombontsoa tsy mitombina amin'ny vokatra azony.
Ny hosoka ara-pitsaboana iray tokony homarihina dia ny fomba ahafahan'ny menaka CBD mampitombo ny hery fiarovanao. Ny mpivarotra dia manao dokambarotra fa ny fihinanana menaka CBD mitete vitsivitsy isan'andro na indroa isan'andro dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny fiarovanao, saingy tsy misy porofo ara-tsiansa hanohanana ny filazan'izy ireo. Ireto misy filazana hafa tsy mitombina:
CBD mampitombo hery fiarovana
Ny CBD antsika dia voajanahary 100%.
Ny CBD madio indrindra eran'izao tontolo izao
Ny menaka CBD dia manana taham-pisorohana 100%.
5. CBD sandoka taonina amin'ny Amazon sy ny mitovy aminy
Ny vokatra sandoka dia amidy eny rehetra eny, anisan'izany ny tranokala Amazon malaza. Ny hany ataonao dia ny mamaky ny hevitra. Betsaka ny olona miverina ao amin'ny pejy milaza fa sandoka ny vokatra, tsy mitovy fofona, ary tonga amin'ny vokatra plastika mihitsy aza. Noho izany, tena zava-dehibe ny manao ny entimodinao amin'ny vokatra CBD madio eny an-tsena. Raha azo atao, vakio ny hevitra ao amin'ny Amazon ary jereo indroa miaraka amin'ireo mpivarotra mitovy aminy. Betsaka ny filazana momba ny hevitra sandoka navoaka tao amin'ny Amazon tato ho ato.
Tamin'ny taona 2019, nandrara ny fivarotana ny vokatra CBD amin'ny tranokalany i Amazon araka ny politikany. Na eo aza izany fandrarana izany, mbola mahita fomba hampiasana ny antsinjarany an-tserasera ihany ny mpivarotra sasany mba hivarotana ny vokatra. Ny vokatra CBD sasany amin'ny Amazon dia diso anarana ho menaka hemp. Ny menaka hemp dia misy cannabinoids mahatonga azy ho vokatra CBD. Ny fametahana diso toy izany sy ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso ny vokatra mety dia manamora ny mpisandoka hanohy hampiasa ny mpivarotra an-tserasera hivarotra CBD.
Hatramin'ny naha-ara-dalàna ny CBD dia nitombo ny olana. Misy ny fipoahan'ny mpisoloky miaraka amin'ny filazana manafintohina. Miakatra ireo fitakiana ireo noho ny tsy fisian’ny fandrindrana ny indostria. Na dia tsara aza ny CBD, dia marefo ny lazany. Ny marina ratsy dia indostria iray izay irery tanteraka. Tsy misy fikambanam-panjakana mifehy izany, izay olana goavana. Ny tsy fahampian'ny fitsipika toy izany dia misy orinasa mitady antoko fahatelo hanamarina ny vokatra.
Na izany aza, ny hafa dia mitodika any amin'ny lalana mifanohitra ary mamoaka vokatra tsy misy dikany. Mitombo isan'andro ny isan'ny fisolokiana CBD. Nitombo be ny isan'ny vokatra CBD izay tsy mandalo fitsapana amin'ny antoko fahatelo. Saika ny 26% amin'ny vokatra CBD rehetra dia tsy mendrika izany satria misy CBD kely kokoa noho ny fampahalalana voalaza ao amin'ny marika.
Ireto misy fomba azonao ampiasaina hahitana menaka CBD avo lenta.
1. Namboarina avy amin'ny zavamaniry hemp organika
Ny zavamaniry hemp dia misy tombony maro, saingy misy teboka iray tokony homarihina. Izy io dia zavamaniry izay maka izay rehetra hitany ao anaty tany. Noho izany, raha mampiasa simika, zezika ary pestisida ny mpamboly, dia miditra ao amin'ny orinasa ireo mpamboly ary, vokatr'izany, ny menaka CBD. Famantarana lehibe iray amin'ny menaka CBD avo lenta dia amboarina avy amin'ny hemp organika na voajanahary. Ny ankamaroan'ny tantsaha mamboly hemp toy izany dia mitaky fanamarinana avy amin'ny governemanta ary andrana tsy tapaka ny sahany. Ireo marika manome menaka CBD avo lenta dia loharanon'izy ireo CBD avy amin'ny toeram-pambolena malaza.
2. Fitsapana loko
Raha resaka loko dia tsy misy afa-tsy ny menaka CBD. Fa kosa, mahita karazana menaka CBD telo ianao. Anisan'izany ny menaka CBD Raw izay toa ranon-javatra mainty na, indraindray, maitso maizina. Ny loko maizina dia midika hoe menaka hemp madio tsy misy sivana aorian'ny fanesorana ny ravina hemp. Ny manaraka dia menaka CBD decarboxylated izay maitso maitso na mainty ihany koa. Ny hany mahasamihafa azy amin'ny menaka CBD manta dia mandalo ny dingan'ny decarboxylation. Mandritra io dingana io, ny molekiolan'ny asidra ao amin'ny menaka dia milatsaka, ka mamela ny cannabinoids hafa tsy misy dikany. Farany, ny menaka CBD voasivana dia manana loko volamena maivana. Io no malaza indrindra eny an-tsena, ary ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa azy io noho ny antony maro.
3. Fitsapana avy amin'ny antoko fahatelo
Ny indostrian'ny CBD dia tsy voafehy amin'ny fomba rehetra. Izany no mahatonga ny mpisoloky be dia be mipoitra avy eny rehetra eny. Ny fomba iray hahitana menaka tsara avy amin'ny hafa dia amin'ny alàlan'ny valin'ny fitsapana avy amin'ny antoko fahatelo avy amin'ny laboratoara nahazo alalana. Afaka mandeha amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra ianao mba hamaky ny valiny. Ankoatra izany, tsidiho ny toeram-pitsapana mba hahitana raha mifanaraka na tsia ny valiny.
4. Ny votoatin'ny THC
THC dia cannabinoid mahery izay tian'ny mpampiasa CBD hialana. Noho izany, mazoto mikaroka vokatra misy atiny THC kely na tsy misy ao anatiny izy ireo. Na izany aza, mpanamboatra maro no tsy matoky ny habetsahan'ny THC amin'ny vokatra. Fa kosa, misafidy ny hanaisotra ny menaka CBD izy ireo, izay mampidi-doza ny mpividy maro. Tsarovy, satria mampiakatra anao ny THC, dia tsy tokony hampiasa milina mavesatra ianao na hanao asa sarotra.
Tsy ny vokatra CBD rehetra hitanao amin'ny tsena an-tserasera dia tena misy. Miely patrana ny fisolokiana menaka CBD. Ny tsy fisian'ny fitsipika ho an'ny CBD dia manome toeram-piompiana tonga lafatra ho an'ireo sy ny maro hafa. Tena ilaina ny malina sy mailo rehefa mikaroka ny vokatra tsara indrindra hampiasaina. Ny hosoka omena ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny tendron'ny vongan-dranomandry ihany satria betsaka kokoa isan'andro. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hahitana menaka CBD sandoka.
Ny menaka CBD kalitao dia manana loko manokana miankina amin'ny haavon'ny fanodinana. Fanampin'izany, tonga amin'ny tavoahangy vera mivolontsôkôlà izy ireo fa tsy plastika. Ny menaka dia avy amin'ny hemp nambolena organika. Ary farany, manome valim-panadinana antoko fahatelo amin'ny antsipiriany ao amin'ny tranokalany foana izy ireo. Manaova fikarohana tsara mba hahazoana antoka fa ny menaka CBD sy ny mpanamboatra dia mahafeno ireo fepetra rehetra ireo alohan'ny hividianana.
Ny sasany amin'ireo tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny menaka CBD dia misy fanamaivanana amin'ny areti-maso, fanaintainana mitaiza ary fampihenana ny tebiteby. Manampy amin'ny fanoherana ny vokatry ny chimiothérapie toy ny maloiloy sy mandoa. Na dia manana tombony aza ny menaka CBD, dia tsara ny manamarika fa misy fiantraikany ihany koa. Ny sasany amin'ireo voka-dratsiny tokony hojerena rehefa mampiasa ny menaka ianao dia ny aretim-pivalanana, ny vava maina, ny maloiloy, ny mandoa, ny havizanana, ny rendremana, ary ny tsy fahampian-tsakafo mihitsy aza.